ဘုန်းကျော်: "မတူရင်မတုနဲ့(၁၀) နှစ်" လမင်းခင်
U Nay Win asked the 888 studuents....U guys fight English?Japan?communist?
What u guys did for independence?
Do u thinks these questions r fair?
ဖြူစင်တဲ့လူငယ်အရွယ် မဟုတ်မခံတဲ့လူငယ်အရွယ် အဲဒိအရွယ်မှာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်တာ သူ ဘယ်နေရာမှာမှ မပါခဲ့ပါဘူး။ ၈၉-မှာ ကျမထောင်ထဲရောက်ပြီးပါပြီ